वैशमै लिंग काटेर फाल्नुपर्ने यो कस्तो रोग ? पिडित भन्छन सास मात्र भएनी बचाई दिनुहोस - Nalapani
वैशमै लिंग काटेर फाल्नुपर्ने यो कस्तो रोग ? पिडित भन्छन सास मात्र भएनी बचाई दिनुहोस
२९ जेठ,- रुकुम पश्चिम-‘भोलि त कसले पो देखेको छ र ?’ हरेकको मुखमा झुण्डिएको यो शब्द सुन्दा निकै सामान्य लाग्छ, तर जब आफ्नै जीवनमा केहि भवितव्य आउँछ, यसको अर्थ निकै भावुक र गहिरो हुन्छ ! नर बहादुर ओलीले सिन्दुर हाल्दा अवली त्यस्तै १६-१७ वर्षकी थिइन रे ! त्यतिबेला जीवनको अर्थ न नर बहादुरलाई थाहा थियो न अवली लाई ?
सानैमा बिहे गरेका रुकुम सानीभेरी गाउँपालिका ७ फुक्रुका नर बहादुर दम्पतिका चार सन्तान दुई छोरा र दुई छोरी छन । सानो परिवार सुखी परिवार भनिन्छ तर परिवार सानो भएपनि अवली ओलीको परिवार सुखी भने कहिल्यै भएन ।
अवलीका आँखामा आशुँ छैनन २१ वर्षदेखि उनका आँखा ओभाएका छैनन । बाँचे तिम्रै काखमा मरे तिम्रै काखमा भनेर १७ वर्षे जवानी नरबहादुरलाई सुम्पेकी अवलीले आफ्ना श्रीमानको बाटो कुर्न लागेको अहिले ठ्याक्कै २१ वर्ष पुग्यो । शसस्त्र द्वन्दको बेला घरबाट हिडेका नरबहादुरको न सास को पत्तो छ न लाशको !
१०-११ वर्षमुनिका साना लालाबालालाई आटो ढिडो, भोक प्यास सहेर अवलीले हुर्काइन, पढाइन, बढाईन तर उनको आशाको वत्ति अझै धिप धिप बलिरहेको छ । एक दिन नरबहादुर घर फर्केर आउलान !
‘हे भगवान तेरो बास गरिवको घरमा मात्र हुने भए मलाइ अझैँ दुख दे’ यो कथनी आफ्नै लागी भनेको जस्तो लाग्छ अवलीलाई । २१ वर्षदेखि आफ्नो श्रीमान फर्किने बाटो कुरेकी उनलाई अहिले यता हेर्यो गार (नदि) उता हेर्यो भिर जस्तै छ । सबै काम सघाउने आफ्नो जेठो छोरा धर्म बहादुर ओली क्यान्सर जस्तो प्राणघातक रोगले जीवन मरणको दोसाधमा छन् ।
बाबुको जीम्मेवारी छोराले पुरा गर्ला र भाईबहिनिलाई आरअदार होला भनेकी आमाको मन फेरी नराम्ररी बिछट्टीएको छ । भगवान गुहार्नु बाहेक ओलीसँग अर्को उपाय छैन । कमाउने श्रीमानको अत्तोपत्तो छैन, भर्खरको छोराले अस्पतालमा मृत्युसँग लडिरहेको छ ।
धर्म र आशाका साना दुई छोराहरु छन । उनकी श्रीमती आशा रोका आफ्नो श्रीमानको स्याहार गर्न चाहेर पनि अस्पतालमा आउन पाउदिनन । उनले छोराहरुको पढाई र परिवारको रोजीरोटीको लागि गाउँकै स्कुलमा करारमा पढाउछिन । ‘श्रीसम्पति सबै बेचिसके ।
मृत्युकुरेको छु, यस्तो बेला न मेरो बुवा मेरो साथमा छन, न मेरी श्रीमती चाहेर पनि मसँग बस्न सक्छिन, बाँचे भने आमाको मुख हेर्ने मन छ’ गहभरी आँशु पार्दै धर्मले मलिलो स्वरमा सिधान्युजसँग भने ।’
धर्म बहादुर ओली समाज परिवर्तन गर्छु भनेर बन्दुक बोकेर हिंडेका पुर्व माओवादी छापामार पनि हुन । हुनत, आज उनले आफुँ मर्न तयार भएको पार्टीको सरकार छ । ३०-३२ ठाउँमा परिवर्तनका लागि भन्दै माओवादी सेना बनेर लडेका धर्मले सरकारसँग हारगुहार नगरेका पनि होईनन तर मेरो पहुँच छैन ।
धर्मले हिक्किदै भने ‘धनि गरिब सबै सम्मान हुन्छ भनेर हिजो कमाउने उमेरमा दिलो ज्यानै फालेर युद्धमा होमिएँ आज न पार्टीले हेर्छ, न मसँग पैसा छ । साना दुई छोराहरुको विचल्ली हुने भयो, बुवा बेपत्ता छन्, आमाको हालत त्यस्तो छ, म दिन गनेर अस्पतालमा बसिरहेको छु ।’
युद्धमा लागेका गोलिका छर्रा निकाल्न जाँदा उनलाई पेनिस क्यान्सर भएको पत्ता लाग्यो । उपचार गर्दा गर्दा घरखेत सबै सकिसक्यो केहि सिप नचलेपछि धर्मको परिवारले धर्मलाई बचाईदिन देश तथा विदेशमा रहेका नेपाली दाजुभाई दिदीबहिनी सबैसँग सहयोगको याचना गरेका छन ।
यदि उहाँलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँको ग्लोबल आइएमई बैंकमा 0707010008210 खाता नम्बर रहेको छ भने थप जानकारीको लागी उहाँको फोन नम्बर ९८४७९८२३१७, ९८४७९९९४८६ मा पनि सम्पर्क गर्न सकिने छ । आर्थिक सहयोग गर्न नसकेनी सामाग्री सेयर गरेर पनि सहयोग गर्नुहोला आज उहाँलाई परेको समस्या भोलि तपाईहामी जो कोहिलाई पनि पर्न सक्छ । सेवा नै धर्म हो ।
← गौतमबुद्ध विमानस्थलबाट ३ करोड नेपालिलाइ खुसिको खबर हावाहुरीसँगै परेको चट्याङबाट आगलागी हुँदा ३९ घर जलेर नष्ट (हेर्नुहोस पुरा बिबरण) →